डिज्नी प्लस बन्डल (२०२०) - Disney +, Hulu र ESPN + पाउनुहोस् - मनोरञ्जन
तपाइँको बाल्यकालको कार्टुन र चलचित्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र मूल टिभि कार्यक्रमहरू, हलिउड चलचित्रहरू, र खेलहरूको पुरानो यात्रा। डिज्नी प्लस + ​​बन्डलले तपाईको Hulu र ESPN + लाई यसको प्याकेज भित्र ल्याउँछ पूर्ण मनोरन्जनको लागि तपाइँको एक स्टप हुनको लागि!
रोमाञ्चक सुनिन्छ! तपाईं कसरी आफ्नो लाभ लिन सक्नुहुनेछ? प्रक्रिया के हो? के तपाईं तिनीहरूलाई छुट्टिनु आवश्यक छ? तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर यहाँ दिइनेछ।
यसका साथै हामी प्याकेजको छिटो विश्लेषण र समीक्षा ल्याउँदछौं। यो तपाइँ निर्धारण गर्न सक्षम गर्दछ कि यो तपाइँको लागि सही विकल्प हो वा हैन। त्यसो भए, सही प्रश्नहरू सोधेर सुरु गरौं!
डिज्नी + बन्डल भनेको के हो?
हरेक स्ट्रिमि service सेवा प्रदायक तपाईलाई सक्कली र लोकप्रिय सामग्रीको उत्तम वर्गीकरण ल्याउन निरन्तर लडाईमा छ। सबैजना उत्तम स्ट्रिमि services सेवाहरूको लागि इजाजत पत्र लिन कडाईका साथ काम गरिरहेका छन्। जे होस्, यी सबै प्राय: तिनीहरूलाई अत्यधिक चार्ज गर्न नेतृत्व गर्दछ।
डिज्नीले Hulu र ESPN का साथ साझेदारी गरी तपाईलाई अपराजेय सामग्रीको सामग्री ल्याउनको लागि। यी तीनै सेवा प्रदायकहरू उनीहरूको फाँटमा अग्रगामी हुन्। तसर्थ, तपाइँ तपाइँको लगानी लायक लायक सामग्री को लागी आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ। हामी यी प्रस्तावहरू मध्ये प्रत्येकले के हेर्छ हेरौं:
१ डिज्नी +
डिज्नी प्लस तपाईं सबै यसको लागि पूर्ण पहुँच ल्याउँछ कार्यक्रम र चलचित्रहरू । तपाईंसँग पूरा डिस्ने लाइब्रेरी उपलब्ध छ 'मा मांग' सामग्री को रूपमा। यसका साथै, तपाईं मार्वल सिनेमाई ब्रह्माण्ड, पिक्सार स्टुडियोको उत्पादन, नेशनल जियोग्राफिक, र स्टार्ट वारहरू पूर्ण संग्रहमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
त्यसकारण, तपाइँलाई तपाइँको औंलाहरूका टोकरीमा अनन्त मनोरन्जनको आश्वासन दिन सकिन्छ।
२ Hulu Basic
यहाँ तपाईं संग एक संग्रह छ मूल टिभी कार्यक्रम र चलचित्रहरू सबै भन्दा लोकप्रिय र सम्मोहक विकल्प संग। यसलाई यो तरिकाले राखौं। Hulu संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता हो। तसर्थ, तपाईं यसको साथ मांग मा लगभग सबै लोकप्रिय शो र चलचित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि यो आधारभूत योजना हो, तपाईंले विज्ञापनहरूसँग डिल गर्नुपर्नेछ। तपाइँको लागि Hulu को विज्ञापन-रहित संस्करण वा Hulu + Live TV तल व्याख्या गरिएको एक विधि छ। समग्रमा, Hulu मूल TV कार्यक्रमहरू र अन्य सामग्रीको लागि तपाईंको एक स्टप चयन हो।
Hulu विद्यार्थी छुटका लागि साइन अप गर्नुहोस्
E. ESPN +
अन्तमा, तपाईंसँग ESPN + छ। यो एक उच्च-खेल खेल स्ट्रिमिंग सेवा हो। ESPN ले तपाइँलाई एक ल्याउँछ प्रत्यक्ष खेलकुदको संग्रह र मूल सामग्री जस्तै अन्तर्वार्ता, वृत्तचित्र, र अधिक।
सरल शब्दहरुमा, यो कुनै पनि खेल प्रेमिकाको लागि हुनु पर्छ। तपाईं धेरै प्रत्यक्ष घटनाहरूको वर्गीकरणमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै एक साधारण क्लिक मा उपलब्ध छ।
के डील वर्थ पाउँदैछ?
यसलाई यो तरिकाले राखौं। यदि तपाईं कुनै पनि अन्य स्ट्रिमि service सेवा प्रदायकको सदस्यता लिनुभएको छैन भने, यो प्याकेजले तपाईंलाई निश्चित रूपमा केही पैसा बचत गर्दछ। लामो अवधि मा, यो एक सभ्य छुट दर हो। तपाइँ खेलहरू, चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, र डिज्नी पाउनुहुन्छ।
त्यस्तै, यदि तपाइँ यी सेवाहरूको व्यक्तिगत रूपमा सदस्यता लिनुहुन्छ भने, समग्र लागत बन्डल भन्दा बढी हुनेछ। त्यसकारण, यो पक्कै राम्रो प्रस्ताव हो।
यी प्याकेजहरू हालै संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपलब्ध छन्, यो हेर्न लायक छ। एक प्रो-टिप को रूप मा, तपाईं सक्छ एक महिना प्याकेज प्रयास गर्नुहोस् हेर्नका लागि कि तपाईंसँग सामग्रीको पूर्ण दायरा पहुँच गर्न समय छ। यदि होईन भने, तब तपाईं अप्ट-आउट र सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
जे होस्, यदि तपाईं यो तुलना केबल वा स्याटेलाइट टिभी , तपाइँ देख्न कि यो पक्कै पनि प्राप्त गर्न लायक छ। सबै पछि, तपाइँ तपाइँको मनोरन्जन आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक पूर्ण हब प्राप्त गर्नुहोस्। यो प्याकेज लगभग सबैलाई फिट गर्दछ, उमेर र प्राथमिकता बिना।
कसरी डिज्नी + बन्डल को सदस्यता लिने?
प्रक्रिया सीधा छ। Disney + अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् वा आधिकारिक डिज्नी प्लस वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईं लग ईन गर्न सक्नुहुनेछ, वा यसले तपाईंलाई सदस्यता लिन भन्नेछ।जे भए पनि, विकल्प दायाँ कुनामा अवस्थित छ। मानक सदस्यता प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्।
प्याकेज चयन गर्दा, यसले तपाईंलाई बन्डल विकल्प देखाउँदछ। याद गर्नुहोस्, यो यूएसएमा मात्र उपलब्ध छ, बेलायत वा अन्य कुनै क्षेत्रमा होइन। यदि तपाईं यसलाई अन्य क्षेत्रहरूबाट आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, प्राप्त गर्नुहोस् VPN संयुक्त राज्यको सर्वर मार्फत यसलाई पहुँच गर्न ।सदस्यता प्रक्रियाको साथ अनुसरण गर्नुहोस्, र तपाईंले भुक्तानी गर्दा, तपाईंसँग सदस्यता हुनेछ।
प्रत्येक अनुप्रयोगमा Disney + कसरी सक्रिय गर्ने?
यो गर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन्। तपाईंले प्रमाण पत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले सदस्यताको लागि सुरुमा प्रयोग गर्नुभयो र अन्य अनुप्रयोगहरूमा लग इन गर्नुहोस्। यदि काम गर्दैन भने, तपाईं Hulu र ESPN + लाई व्यक्तिगत रूपमा सक्रिय गर्न एक ईमेल छ, तपाईं लिंक भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, र प्रक्रिया अनुसरण गर्न सजिलो छ।
यदि तपाईं अझै भ्रमित हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो डिस्नी + अनुप्रयोग खोल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो खाताको सदस्यताहरूमा जान सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ तपाइँले सदस्यताहरू प्रबन्ध गर्न विकल्प पाउनुहुनेछ।
यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाई Hulu र ESPN + देख्नुहुनेछ।
त्यहाँ पछाडि एक सक्रिय बटन हुनुपर्दछ।
तिनीहरूलाई सक्रिय गर्न ती बटनहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
डिज्नी + को साथ Hulu + प्रत्यक्ष टिभि कसरी प्राप्त गर्ने?
तपाईंले सुरु गर्नु अघि, याद गर्नुहोस् कि तपाईंले Hulu + Live टिभीको लागि कुनै अतिरिक्त छुट प्राप्त गर्नुहुने छैन। मूल्य उस्तै नै रहनेछ जुन तपाई हुलु बेसिकको लागि पाउनुहुन्छ।
तपाईंको Hulu सदस्यता सक्रिय गरेपछि, अनुप्रयोग खोल्नुहोस्
सदस्यताहरूमा जानुहोस्, र त्यहाँबाट तपाईं प्याकेज परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ
परिवर्तन निश्चित गर्नुहोस्, र यो तुरून्त सक्रिय हुनेछ
तपाईंलाई थप रकमको लागि शुल्क लगाइनेछ, त्यसैले तपाईंले भुक्तानी प्रमाणहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ
यो जटिल लाग्न सक्छ, तर यो सीधा छ। तपाईं यसबाट कसरी फाइदा उठाउनुहुन्छ? ठीक छ, डिज्नीले Hulu Basic को सदस्यता प्रत्येक महिनाको लागि सहि मूल्य राख्न सक्छ। त्यो पैसा तपाईंको Hulu खातामा हुनेछ र तपाईंले Hulu + Live टिभीको सदस्यता लिँदा प्रयोग हुने छ।
त्यसकारण प्रो-टिपको रूपमा बन्डल पाए पछि आफ्नो Hulu को योजना एक वा दुई दिन परिवर्तन गर्नु राम्रो हुन्छ।
के तपाई ESPN + को केहि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
ESPN + उत्तम प्याकेज हो जुन ESPN ले प्रस्ताव गर्दछ, र यदि तपाईं योजनालाई सस्तोमा बदल्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई बदलामा भुक्तानी हुने छैन। न त तपाईले कुनै छुट पाउनुहुनेछ। तसर्थ, तपाईं कम्बोमा ESPN + सदस्यता को साथ यो चाल प्रयास गर्न को लागी कुनै कारण छैन।
डिज्नी + बन्डल तपाइँलाई छुट मा सबै तीन संसारको सबै भन्दा राम्रो ल्याउँछ। यो निश्चित रूपले हरेक एक पैसाको लायक छ किनकि यी अनुप्रयोगहरूको व्यक्तिगत सम्झौता त्यो उत्साहजनक छैन। जे होस्, उनीहरूको समाचारको सम्बन्धमा अद्यावधिक रहन र समय-समयमा मासिक सदस्यता प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ।
अनब्लकमा सुन्नको लागि नि: शुल्क संगीत
प्लूटो टिभी गाईड एन्ड्रोइड बक्समा काम गरिरहेको छैन
शीर्ष मूल्या rated्कन गरिएको फिल्म स्ट्रिमिंग साइटहरू
नेटफ्लिक्सको नि: शुल्क महिना पाउनुहोस्
शोटाइम कुनै पनि समय com सक्रिय अमेजन आगो
रोबलोक्समा प्रयोग भएको मुद्राको नाम के हो?